Daawo Alfanaan Knaan Abdi Warsame & Nelly Furtado oo Hees cusub oo Jaceeyl ah soo saaray, Telefishinada Caalamka maxeey ka yiraahdeen? - iftineducation.com
iftineducation.com – Fanaanka Soomaaliyeed ee Caalamka sida weeyn looga jecel yahay Keeynaan Cabdi Warsame ayaa waxa uu soo saaray Hees cusub oo Jaceeyl ah taas oo la magac baxday ” Is Anybody Out There” .AlFanaan Knaan Abdi Warsame waxaa Heestaan cusub la qaadeeyso Fanaanada weeyn ee lagu magacaabo Nelly Furtado.
Alfanaan Knaan Abdi Warsame oo magac iyo Taageero xoogan ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ayaa waxaa lagu soo xasuustaa Heestii Wavin Flag oo uu Calanka Soomaaliyeed gaarsiiyay halkii ugu sareeysay ka dib markii uu ka taagay Koobkii Aduunka oo xiligaas ka dhacay dalka South Africa (2010).
Keeynaan oo ku soo koray dalka Canada waxa uu ka jecleeystay Calanka Kanada inuu mar kasta kor u qaado Sharafta Calankiisa hooyo ee Soomaaliyeed .Alfanaan Knaan wuxuu sidoo kale Heeso badan ka sameeyay dhibaatada ka taagan dalka Soomaaliya kaas oo cod dheer ku yiri ” Dhibkiina waa batee dalka nooga soo baxa” !!.
Alfanaan Knaan Abdi Warsame iyo kooxdiisa oo Dunida si weeyn caan uga noqday waxeey Isbuuc walba Show iyo Heeso ku soo dhigaan dalal fara badan oo Caalamka ku yaal gaar Wadamada ku hadla luuqada English-ka.
Qaabkaad ku ogaankarto In Uu Been Kuu Sheegayo Ninkaada : Sir Culus iftineducation.com